Kedu ihe bụ Mgbasa Ozi Ndị Obodo? | Martech Zone
Dịka FTC kọwara ya, mgbasa ozi nke obodo na-aghọ aghụghọ ma ọ bụrụ na enwere nkọwahie ma ọ bụ ọbụlagodi na enwere enweghị ihe ọmụma nke ahụ nwere ike iduhie onye na-azụ ya ime ihe n'ụzọ dị mma n'ọnọdụ ndị ahụ. Nke ahụ bụ nkwupụta okwu nke onwe, echeghị m na m chọrọ ịgbachitere onwe m megide ikike gọọmentị.
Federal Trade Commission na-akọwa nwa afọ mgbasa ozi dị ka ọdịnaya ọ bụla nke yiri akụkọ, akụkọ isiokwu, nyocha ngwaahịa, ntụrụndụ, na ihe ndị ọzọ gbara ya gburugburu na ịntanetị. Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi FTC: Ntuziaka maka Azụmaahịa
Afọ gara aga, Onyenwe anyị & Taylor kwụrụ ụgwọ 50 online ejiji influencers biputere foto nke Instagram nke onwe ha yi uwe paisley site na mkpokọta ohuru. Agbanyeghị, ha ekpughere na ha nwere nyere onye ọ bụla na-emetụta uwe ahụ, yana ọtụtụ puku dollar, iji kwado ha. Mmebi ọ bụla nke enweghị nkwupụta ahụ gaara akpata ntaramahụhụ obodo nke ihe ruru $ 16,000!
Ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị na-ebipụta mgbasa ozi dijitalụ anaghị ekwenye na iwu FTC nke na-achịkwa ebe nrụọrụ weebụ na mgbasa ozi na nkwado ọdịnaya, dị ka a ihe omumu nke MediaRadar weputara n’izu a.
Ihe mere nkwuputa ahụ ji dị oke egwu
Ngosipụta nke mgbasa ozi mgbasa ozi bụ iwu na United States na n'ọtụtụ mba ndị ọzọ. Mana igosipụta mmekọrịta na ika abụghị naanị okwu gbasara iwu, ọ bụ ntụkwasị obi. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa kwenyere na nkwupụta ahụ nwere ike imetụta ọnụego ntụgharị, mana anyị ahụbeghị nke a ma ọlị. Ndị na - agụ akwụkwọ anyị anọnyerela anyị afọ iri ma tụkwasị obi na, ọ bụrụ na m bipụta nkwanye ngwaahịa, na m na-eme ya na aha m na ahịrị.
Nghọta nke onye na-eri ihe dị oke mkpa, na mpempe nkwado ekwesighi ịkọwa ma ọ bụ gosi ndị ahịa na ha bụ ihe ọ bụla karịa mgbasa ozi. Ọ bụrụ na ngosipụta dị mkpa iji gbochie aghụghọ, nkwupụta ahụ ga-abụrịrị nke ọma ma ọ ga-abụrịrị nke pụtara ìhè. Adam Solomon, Michelman & Robinson
Agaghị m egwu egwu aha m. N'ezie, a na-arịọ m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị ka m bipụta isiokwu ma kwụọ m ụgwọ na backlink ma m na-ajụ ha. Mgbe ụfọdụ, ụlọ ọrụ na-enwe obi ike ịrịọ ka m tinye ihe na-enweghị nkwupụta. M dee ha azụ na-ajụ ha ihe mere ha ji kwere emebi gọọmenti etiti ụkpụrụ dị mma… na ha na-apụ n'anya na-adịghị mgbe ikwu.
Onye ọrụ Chad Pollitt bipụtara na nso nso a 2017 Native Technology Advertising Landscape ma ọ bụ ihe dị mma, na-agagharị n'okporo mmiri na teknụzụ niile nke mgbasa ozi obodo metụtara ma metụta.
Dika akuko ohuru nke MediaRadar biputara, Ndi ndu na nkuzi na Mgbasa ozi ndi ala, ikuchi na ọchịchọ maka mgbasa ozi ala dị elu nke ukwuu na nkezi nke ndị mgbasa ozi ọhụrụ 610 na-eji azịza ọdịnaya eme kwa ọnwa.
Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi nke MediaRadar
Tags: Adam Solomonngosiftcngosi ngosiNdị na-emerụ ahụOnyenwe anyi & TaylorMichelman & Robinsonnwa afọ mgbasa ozi